ဩဂုတျ 4, 2020 – Healthy Life Journal
ရာသီလာစဉ် ခံစားရသည့် ဝေဒနာများအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲနာကျင်မှု ဝေဒနာတွေ သက်သာစေဖို့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကို သုံးရပါမယ်။ ရာသီလာချိန်မှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့ကလည်း အရေးပါပါတယ်။ ဒါမှသာ အကောင်းဆုံးကုသမှုကို ခံယူနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ရာသီလာစဉ် ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေ...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— သင့်အသားအရေက နွမ်းနယ်ပင်ပန်းပြီး အိုမင်းရင့်ရော်နေရင် ပန်းသီးနဲ့ ပျားရည်ရောပြီး ပေါင်းတင်ပေးပါ။ ပန်းသီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဘီနဲ့စီတို့ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားက အဲဒီအင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် ထိခိုက်မှုကို သက်သာလျော့ပါးစေပါတယ်။ ပန်းသီးမှာ ဂလိုင်ကိုးလစ်အက်စစ်လည်း...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ယေဘုယျအားဖြင့် ၆ လအထက် ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့ အရွယ်ကစလို့ ကလေးတွေမှာ တစ်ပတ်သုံးကြိမ်ထက် လျော့နည်းပြီး ၀မ်းသွားတာကို ၀မ်းချုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ၀မ်းမချုပ်စေဖို့ အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ ကျွေးဖို့လိုသလို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပြုလုပ်ခိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကျွန်မတို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရအောင်။ ဆိုပါစို့ ၂၄ နာရီရှိတဲ့ တစ်နေ့တာမှာ အချိန်တစ်နာရီ ပိုရခဲ့ရင် အဲဒီတစ်နာရီကို သင်ဘာလုပ်မလဲ။ (၁) တီဗီကြည့်မလား၊ (၂) ၀ါသနာပါတဲ့အရာကို လုပ်ဆောင်မလား၊ (၃) အိပ်စက်မလား၊ (၄) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မလား၊...
နှလုံးခုန်နှုန်း မူမမှန်ဘူးဆိုတာ . .
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တချို့လူတွေက ပြောကြတယ် . .အခုတလော နှလုံးခုန်တာ မူမမှန်ဘူး . .မြန်နေသလို ခံစားရတယ်ဆိုတာမျိုး။ တချို့ကျတော့လည်း နှလုံးခုန်တာက နှေးနေတယ်ဆိုပြီး ဘာလုပ်သင့်သလဲ တိုင်ပင်တာမျိုး မကြာခဏ ကြုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ “ဘယ်လိုမျိုးကို...
နေကြာစေ့စားတာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်သလဲ . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နေကြာစေ့စားတာကြောင့် ရရှိစေနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောကို လျော့ကျစေတာ၊ ရောင်ရမ်းမှုကို တားဆီးပေးတာ၊ သွေးကြောတွေကို သန့်စင်စေတာ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေတာကြောင့် အာဟာရရှိတဲ့ သရေစာအဖြစ် စားပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။...
အသက်ရှည်ပြီး ပိုကျန်းမာဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝနရီအလိုက် လုပ်ဆောင်ရအောင်
———၊ မီမိုးမေ(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တရုတ်ဆေးပညာအရ ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝနရီအလိုက် သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ နံနက် ၃ – ၅ နာရီ ထိုက်ချိကစားရန် အကောင်းဆုံးအချိန် တရုတ်ဆေးပညာအရ...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေက ဘယ်လိုအသီးတွေကို စားလို့ရပါသလဲ၊ ဘယ်လိုအသီးတွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ A. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ အသီးတွေက တော်တော်များများ စားလို့ရပါတယ်။ ဘာနဲ့ကြည့်သလဲဆိုရင် GI (Glycemic Index)နဲ့GL(Glycemic Load)ဆိုပြီး...
အစာအိမ်ဘက်တီရီးယားပိုး H.pylori အကြောင်း
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အစာအိမ်အနာက စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုတည်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အစာ အစာအိမ်ဘက်တီးရီးယားပိုး (Helicobacter pylori) ပိုးကြောင့်လည်း အစာအိမ်အနာ ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ လူအတော်များများ သိလာကြပါပြီ။ ဒါကြောင့် အစာအိမ်ဘက်တီးရီးယားပိုး H.pylori...